[Ankapobeny ] 18 Janoary, 2015 11:26
Ikalamako ! .... prézanty !!!
Niverina amin’ny taniny ny blaogista, huhuhu.
Tena nataon’ny facebook lany inspiraka mihitsy ikalamako tsy nahita blaogy natoraka nandritra ny taona maromaro an . Malalaka kokoa ny sehatra any manko, sady JeSuisCharlie kokoa satria mora ny fandraisana anjara mavitrika sy fifanakalozan-kevitry ny mpinamana, na ny tsy mpinamana fa mpanaraka “pejin’ny mpankafy” (sady tsy voatery mizème lay pejy) ; fa ato amin'ny blaogy mila miditra ho mambra serasera vao afaka mikapetsona mamaly hevitra.
Fa tamin’ny faramparan’ny taona teo iny aho ohatra ny nanana fikasana hiverina ato. Hitako ihany ny lafitsaran’ny blaogy : afaka mirediredy irery eto aho tsy voatery hisy hamaky, tsy voatery hisy hamaly hevitra. Fa any amin’ny facebook toy ny tsy mety ilay izy fa matoa nosoratana dia natao hovakiana, dia ny namana toa mahita havaly foana, laolina. Ankoatra izay dia mila marimaritra iraisana ihany koa any noho izy toerana iraisam-pirenena. Hany ka misy zavatra mila atao amin'ny fiteny telo na efatra rehefa tena tiana hahakasika ny namana rehetra
Nohidiako fotsiny ny tranoko any satria nafana fo loatra aho tany ka raha misintaka tanteraka (désactivée) dia mitsambikimbikina daholo ireo resaka nandraisako anjara – ary faran’zay halako mahita ireny an, satria raha olona tsy naharaka ilay izy dia toy ny hoe adala miteny irery ny tena. Misy koa ny pejy sy vondrona iandraiketako ka manjary afaka ireo lohadinika sy hafatra nozarazaraiko tetsy sy teroa.
Rehefa hitako tafaverina soa amantsara ato aho dia hiezaka amin’izay hampifandanja ny ataoko any sy ato, fa tena reko ihany hoe nitady ho very ilay fitiavako mampiasa ny saiko hanoratra. Angamba koa mila miverina mamaky boky etsy ambony sezalava amin’izay an.
Betsaka ny zavatra vita sy hita tany aloha na izany na tsy izany e. Nahitana karazan’olona, karazan-kevitra, karazan-kira, karazan-damaody, karazana revy, sns. Taona maro lany tamin’ny fifanampiana, fifampizaràna fifaliana sy fahoriana, fifanomezan-tànana, fifanakalozan-kevitra, fifanoroana hevitra, fampiroboroboana ny soa sy ny kanto, fanaovana resa-tsaka sy resak’alika ihany koa, fifanomezana lagy sy fakàna litika, sy ny sisa sy ny sisa.
Dia tao ihany koa ny zavatra mba nanamarika ny fiainana manokana, toa ity hira iray ity izay nentiko namikavika ny herinandro farany tamin’iny taona 2014 iny, sy nitondra tsikitsiky nankaty amin’ny 2015.
Traty ny taona daholo e ! (mbola tsy tara io fa mbola tsy tapitra ny janoary an )